beauty – DR NU MYAT THEINGI OO
ဒီနေ့ ဘာအရောင် သုံးသင့်သလဲ ? Dr.Nu Myat Theingi Oo အရောင်တွေဟာ ကျွန်မတို့ရဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားနဲ့ စိတ်ခံစားမှုတို့အပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိစေတယ်ဆိုတာ သတိထားမိကြမှာပါ။ အရောင်တွေဟာ ကျွန်မတို့ကို အားရှိစေနိုင်တယ်။ တည်ငြိမ်စေနိုင်တယ်။ ရဲရင့်စေနိုင်တယ်။ ပျော်ရွှင်စေနိုင်တယ်။ ဒါကြောင့် အရောင်တွေရဲ့အစွမ်းနဲ့ ကျွန်မတို့ကို ဘယ်လိုအကျိုးရှိစေ နိုင်မလဲဆိုတာ စမ်းကြည့်ရအောင်။ ပထမဆုံးအောက်ဖော်ပြပါ မေးခွန်းတွေကို ဖြေကြည့်ပြီး အခုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ သင့် စိတ်အခြေအနေနဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ အရောင်တွေကို ဝတ်ဆင်အသုံးပြုကြည့်ပါ။ အောက်ပါ စာကြောင်းတွေအနက် သင်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ စာကြောင်းတွေကို မှတ်ထားပါ။ ၁။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှုတွေ လျော့နည်းနေပြီး လူတွေဟာ တစ်ခါတစ်ရံမှာ ကိုယ့်အပေါ် အခွင့်အရေး ယူတတ်ကြသလို ခံစားနေရတယ်။ ၂။ ကိုယ့်ရဲ့ ဘဝမှာ မေတ္တာတွေ၊ စိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေကို … More ဒီနေ့ ဘာအရောင် သုံးသင့်သလဲ ?
Leaveacomment ဒီနေ့ ဘာအရောင် သုံးသင့်သလဲ ?